म त हारपिक हालेर नै पानीपुरी अमिलो बनाउँछु, चुक अमिलो हालेर पानी पुरी बेच्न थालियो भने नोक्सान भइहाल्छ नि ! « Himal Post | Online News Revolution
प्रकाशित मिति : २०७४, ६ श्रावण १९:२२
हामीले सिन्धुपाल्चोकका छात्रछात्रालाई सोध्यौँ, ‘तिमीहरू कति चटपटे र पानीपुरी खान्छौ ?’
सबैले ‘मीठो मानेर प्रायः खाजा नै त्यही खान्छौँ’ भने । अनि हामीले एउटा फोहोर कचौरा ल्याएर, त्यो चिनी अमिलो हालेर कचौरा सफा गर्‍याै‌ भन्यौँ, ‘अहिले तिमीहरूले के देख्यौ ? सबैले भने, ‘तपाईँले चिनीजस्तो वस्तुले भाँडा सफा गरेको देख्यौँ ।’
‘होइन, हामी त खाँदैनौँ, यस्तो विषजस्तो वस्तु,’ छात्रछात्राले ठुलो स्वरले भने । ‘तिमीहरूले खाने चनाचटपटेमा त यही हालिन्छ नि’ भनेर हामीले चना, केराउ, प्याज, भुजामा नुन हालेर उनीहरूलाई चाख्न दियौँ ।
‘हेर हामीले अमिलो भनेर हालेको यही चिनी अमिलो हो, जसले हामीले अघि फोहोर कचौरा सफा गरेका थियौँ,’ मैले भनेँ । छात्रछात्राहरू ‘लौन, यस्तो त हामीलाई थाहै थिएन’ भनेर कुरा गर्न थाले । अनि हामीले उनीहरूलाई कसरी पानी पुरीमा पनि यसै गरी चिनी अमिलो वा शौचालय सफा गर्ने रसायन हाल्छन् भनेर बतायौँ । त्यसै गरी विभिन्न प्याकेटमा आउने चाउचाउ, कुरकुरे आदि पनि यस्तै शरीरलाई हानि गर्ने रसायन हालेर बनाइएको हुन्छ भनेपछि सबैले जिब्रो टोके । ‘यस्तो खाएर पो त हाम्रो पेट कटक्क काट्दोरहेछ’ भनेर आपसमा कुरा गरे । स्कुलमा शिक्षकले पनि भने, ‘यस्तो खराब रसायन हालेर चनाचटपटे र पानीपुरी बनाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा त हामीलाई थाहै थिएन । हामीले झन् चनाचटपटे त स्वस्थकर हुन्छ भनेर पो खान्थ्यौँ त ?’
शिक्षकको कुरा सुनेर हामीले भन्यौँ, ‘चना चटपटे घरमा सफा तरिकाले बनाउने र कागतीको अमिलो हाल्ने, चाउचाउ न हालेर खाने हो भने त स्वस्थकर नै हो । पानीपुरी सफा तरिकाले घरमा बनाएर खाने हो, अस्वस्थकर वस्तु होइन । चिनी अमिलो हालेको पानीपुरी पो विष भयो त । कतिचोटि शौचालयमा सफा गर्न हालिने रसायन पनि तपाईँहरूले खानुभयो होला नि ।’
शिक्षकले भने, ‘अब हामी यसमा विचार गर्छौँ । अब त सरकारले पनि स्कुलमा चाउचाउ र अस्वस्थकर वस्तु ल्याउन निषेध गराउनु भनेर चिठी पठाएको छ ।’ मैले भनेँ, ‘सरकारले सबै स्कुलमा आएर हेर्न सक्दैन । तपाईँहरूले नै चाउचाउजस्ता वस्तु खान विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’
‘के गर्ने, तपाईँ यस्तो भन्नुहुन्छ ? मेरी श्रीमतीले बच्चालाई दिनदिनै खाजा बनाउन झ्याउ भो भनेर मलाई दुई कार्टुन चाउचाउ ल्याइदिनु भनेपछि मैले किनेर लगिदिए । तर चाउचाउ बाहिरी प्याकेटका वस्तु यति खराब हुन्छ भन्ने थाहा थिएन,’ एक शिक्षकले अँध्यारो मुख लगाए । ‘तपाईँले समय–समयमा आएर हाम्रो विद्यार्थीका आमाबुबा, हजुरआमालाई पनि यस्तै कुरा सुनाइदिन्स् न । तपाईँले भनेपछि विश्वास गर्छन् । हामीले भनेको त टेरपुच्छर नै लगाउँदैनन् ।
‘यसरी फोहोर भाँडा माझ्ने कुरा मिसाएको खानुहुँदैन भनेर व्यावहारिक रूपमा भाँडा पनि माझेर देखादिनुस् न । अनिविश्वास गरिहाल्छन नि,’ मैले भनेँ । सिन्धुपाल्चोकमै स्कुलमा अभिभावक समूहमा पनि स्वस्थ खानाबारे छलफल गर्दा केही आमाले भने, ‘हाम्रा बच्चाले त पानीपुरी, चटपटे र चाउचाउबाहेक अरू त खाजा नै नखाने भन्छन् । अनि, हामी के गरौँ त ?’
आमाहरूको कुरा सुनेर उनीहरूलाई पनि चिनी अमिलो हालेर भाँडा सफा गरेर देखाएँ । त्यही चिनीअमिलो चना चटपटेमा हालेर अमिलो चटपटे ख्वाउन पनि लगाइयो । यसरी हाकाहाकी चिनी अमिलोजस्तो विष तपाईँहरूले आफ्नो सन्तानलाई ख्वाउनुहुन्छ भने हामी त केही भन्न सक्दैनौँ । भोलि तपाईँका छोराछोरी कुपोषित भए, बिरामी भएर अस्पताल लैजानुप¥यो भने त दुःख पाउने तपाईँहरू नै हो । तपाईँहरू नै विचार गर्नुस् आफू र आफ्ना सन्तानलाई कस्तो भोजन ख्वाउने ?’ अनि केही आमाले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए बच्चालाई के खाजादिने त ?’
‘खाजा त जति पनि छ नि । भुटेको भात, उसिनेको आलु, चना–चिउरा, बदाम, रोटी, अन्डा, खिचडी । यस्ता वस्तु ख्वाउन तपाईँहरूले सन्तानलाई प्रेरित नगरेर चिनी अमिलो र हारपिकजस्तो चिज हालेको खाना ख्वाउनुहुन्छ भने आफ्ना सन्तानलाई बिरामी होस् भन्ने श्राप दिइरहनुभएको छ । के तपाईँ आफ्ना सन्तानलाई श्राप दिन चाहनुहुन्छ कि स्वस्थ हुने वरदान ? आफैँ विचार गर्नुस् ।’ हाम्रो कुरा सुनेर आमाहरू चुप छन् ।